ओहो ! यो होनी तरिका, स्ट्रबेरी खेती हेर्न पर्यटकको लर्को – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १ चैत्र शनिबार ०९:५७
ओहो ! यो होनी तरिका, स्ट्रबेरी खेती हेर्न पर्यटकको लर्को
पहिलो पटकको परीक्षण सफल भएपछि नेपालमा नै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा गरिएको स्ट्रबेरी खेती कृषि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै छ । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–१, जनता बजार पश्चिम घाग्रा खोला किनारमा सुरु गरिएको स्ट्रबेरी खेती हेर्ने र अध्ययन गर्न दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लर्को लाग्ने गरेको छ । काठमाडौँस्थित गोल्यान एग्रो ट्रेड प्रालिले यहाँ ३५ बिगा क्षेत्रफलमा स्ट्रबेरी खेती गरेको छ । पहिलो परीक्षण सफल भएपछि यो वर्ष ठूलो क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरिएको प्रालिका कृषि वैज्ञानिक विवेक शुक्लाले जानकारी दिनुभयो । यो क्षेत्रका लागि नयाँ खेती भएकाले स्थानीय तथा विदेशबाट समेत दैनिक दुई सयदेखि चार सय जनासम्म आउने गरेको खेतीको अनुसन्धान गरिरहनुभएका वैज्ञानिक शुक्लाले जानकारी दिनुभयो । यहाँ युरोप, अमेरिका, इजरायललगायतका क्षेत्रबाट हेर्न÷अध्ययन गर्न तथा ताजा स्ट्रबेरी खरिद गर्न मानिस फर्ममा नै आउने गरेका छन् । स्ट्रबेरी खासगरी चिसो र उच्च क्षेत्रमा मात्र हुने विशेषताको बाली हो । प्रालिले गत वर्ष परीक्षणका लागि चार कट्ठा क्षेत्रफलमा मात्र गरेको थियो भने सो खेतीको परीक्षण सफल भएपछि यो वर्ष विस्तार गरिएको हो । यहाँ भारतको कोलकाताबाट चार प्रकारका स्ट्रबेरीको बिरुवा ल्याएर खेती गरिएको छ ।
झापाको हावापानीमा समेत राम्रो खेती भएपछि सबैका लागि चासो र सरोकारको विषय भएको छ । यहाँ स्विट सेन्सेसन, स्वरिडा ब्युटी, क्यामारुजा र नामिलिया नामक जातका गरी छ लाख स्ट्रबेरीका बिरुवा रोपिएको स्ट्रबेरी फर्मका कर्मचारी राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । करिब चार लाख बोटबाट उत्पादन सुरु भएको छ भने अन्य बिरुवा उत्पादनका लागि तयार भइरहेका छन् । धेरै सुक्खा र गर्मी मौसममा नहुने भएकाले तराईमा यसलाई हिउँद महिनामा लगाउन सकिने अनुसन्धानमा देखिएको छ । रोपेको तीन महिनामा स्ट्रबेरी खानयोग्य हुन्छ । यहाँबाट हालसम्ममा लगभग ५५ टन बजारमा बिक्री भइसकेको छ । हावापानी, मौसमका कारण लागत मूल्य फरक पर्ने भएकाले स्ट्रबेरीलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसमा प्रतिकिलो चार सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म रहेको छ । कुल १० करोडभन्दा बढीको लगानी भएको छ । यहाँ हाल ५० जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
स्ट्रबेरी मौसमी खेतीका रूपमा लगाइने यो बाली रोपिएको दुई महिनादेखि नै फल्न सुरु हुन्छ । यसले लगातार चार महिनासम्म उत्पादन दिइरहने जनाइएको छ । यहाँ उत्पादन भएका वस्तु प्रदेश १ का मुख्य सहर र काठमाडौँमा बिक्री हुँदै आएको छ । उभोक्ताको माग उच्च रहेकाले उत्पादनले माग धान्न नसकेको कर्मचारी भट्टले बताउनुभयो । प्रालिले देशका विभिन्न स्थानमा गरी जम्मा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा फलफूल खेती गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । हाल दुई सय बिघामा अग्र्यानिक फलफूल खेती सुरु गरिसकेको बताएको छ । यो खबर आजको गोर्खापत्रमा छ।
PREVIOUS Previous post: विश्वब्यापी महामारी नोबेल कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्ध जितौँ – होउ यान्छी
NEXT Next post: आज देशभर हावाहुरी, असिना र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना